हाम्रो 3-चरण रिकभरी मोडेल प्रयोग गरेर अश्लील छोड्दै | इनाम पुरस्कार
छोड्दै पोर्न पुरस्कार फाउंडेशनको तीन चरण पुन: प्राप्ति मोडल
इवार्ड फाउण्डेशनको तीन चरणीय पुनःप्राप्ति मोडेल
इन्वार्ड फाउण्डेशनको टोलीले इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको समस्याग्रस्त प्रयोगलाई सम्बोधन गर्न तीन-चरण रिकभरी मोडेल विकसित गरेको छ। पुन: प्राप्ति अनिवार्यताबाट मस्तिष्कलाई निको पार्नको बारेमा अनिवार्य रूपमा छ जसले महिना वा वर्ष भन्दा बढी बनाएको छ। यो रासायनिक शिक्षा र दिमाग मा लत कार्य मा अनुसन्धान मा आधारित एक सरल दृष्टिकोण हो। तपाईं यहाँ अज्ञात अनलाइन रिकभरी समुदायहरूको मद्दतबाट सुझावहरू प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ nofap.com or rebootnation.org। तपाईं निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाइँ वास्तविक जीवन रिकभरी समुदाय जस्तै एक 12 चरण कार्यक्रम चाहानुहुन्छ। वैकल्पिक रूपमा, एक चिकित्सक हानिकारक यौन व्यवहारसँग व्यवहार गर्न प्रशिक्षित हुन सक्छ तपाईंको आवश्यकताहरु पूरा गर्न सक्छ।
धेरै चिकित्सकहरू अहिले मात्र पोर्न-प्रेरित अप्ठ्यारो रोग र अन्य अश्लील सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै डिप्रेशन वा चिन्ता बारे सिक्न सुरु हुने छन्। त्यसैले निश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरू यो वेबसाइट जाँच गर्नुहोस् वा yourbrainonporn.com। प्रायः चिकित्सकहरूले दिमागी कार्यको बारेमा जान्न बिना मनोविज्ञानमा प्रशिक्षित गरिन्छ। एक आदतलाई हटाउन र नयाँ चाल जारी गर्न तपाईंको दिमागलाई इनाम दिन सजिलो छैन। यद्यपि, यो कामयोग्य छ र तपाईंको जीवनको अन्तमा सुधार गर्नेछ। धेरै मान्छेले उनीहरूको दिमाग "रिबूट" बारे कुरा गर्छन्। धेरै कम्प्युटरहरू खुल्ला हुन्छन् जब हामी एक कम्प्युटरसँग गर्न सक्छौं जुन जामो भएको छ। यी रिबुट गर्दै वा पुनःप्राप्ति खाताहरू सयौं जवानहरूले देखाउँछन् यो कसरि गर्न सक्छ।
यी तीनवटा सरल सिद्धान्तहरू हुन्:
अश्लील प्रयोग गर्न रोक्नुहोस्।
कुञ्जीको जीवन सिक्नुहोस्।
चरण 1 - अश्लील प्रयोग गर्न रोक्नुहोस्
रिकभरी केवल वास्तवमा सुरू गर्न सक्छ जब एक व्यक्ति को हेर्न रोक्न र पोर्न को बारेमा fantasizing रोक्न छनौट गर्दछ।
उपभोक्ता अश्लील पोर्न रोक्न को लागी प्रेरणाको लागि, प्रयोगकर्ताले पहिचान गर्न आवश्यक छ कि यसले गम्भीर मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य समस्याहरूको साथसाथै सामाजिक व्यक्तिहरूको कारण हुनसक्छ। यसले पनि आपराधिक रेकर्ड प्राप्त गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् अश्लीलको साथ कसरी समस्या चिन्न सकिन्छ?.
द इभरेष्ट फाउण्डेशनमा हामी "" घाँटीबाट गिलास बाहिर "वाक्यांश प्रयोग गर्दछौं। सबैले बुझ्दछन् कि घाँटीको टुक्रा अझै पनि शरीरमा छ, चोटको कारण हुँदा चर्को लाग्न सक्दैन। त्यसैले इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको साथ निरन्तर अन्तरक्रियाको तनाव हटाउनाले मस्तिष्क रिबुट दिन्छ। त्यसपछि त्यसपछि अचम्मको सामान्य स्तरमा निको पार्नु र पुनरुत्थान गर्न सक्नुहुन्छ।
यसलाई दिने निर्णयको साथ सुरु गर्नुहोस्। आफैलाई 1 दिनको लक्ष्य सेट गर्नुहोस्। उद्देश्य हाम्रो शरीरको सिग्नलहरू पहिचान गर्न सुरु गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई कसरी प्रतिक्रिया दिन अझ राम्रो सिक्नको लागि। सूचना दिन तपाईं प्राय: अश्लील हेर्न हेर्नका लागि कस्ता समयहरू याद गर्नुहोस्। एक 'आग्रह गर्नुहोस्'हेर्न मन पर्दैन? मस्तिष्कमा यो टोल-युद्ध-युद्ध हो। यो खुशी न्यूरोकोमिकल्स को एक हिट प्राप्त गर्न को इच्छा छ कि उनको बिना असुविधा देखि बचें। यो प्रमाणित गर्न चाहनेसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ कि हामी आफैलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं। त्यो आग्रहले मस्तिष्कमा कम डोपामिनि वा कम ओपियोडिडको चेतावनी दिन्छ। यसले एड्रेनालेन-ईन्ड्डर्ड अउजललसँग तनाव प्रतिक्रियाको सुरुमा पनि संकेत गर्दछ जसले हामीलाई "अब केहि गर"!
मानसिक ब्रेक राख्न केहि क्षणहरूको लागि रोक्न सक्षम हुनु र अभिनय गर्नु अघि सोच्न मद्दत को मार्ग कमजोर र आदत तोड्न सुरु हुन्छ। यो अब हामी चाहन्न कुनै आदत तोड्ने प्रयासमा एक बहुमूल्य व्यायाम हो। यसले आत्म-नियन्त्रण निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। त्यो लामो समयको सफलताको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुञ्जीको जीवन शैली हो। यो सावधानी को रूप मा महत्वपूर्ण वा प्रतिभा को रूप मा महत्त्वपूर्ण छ। जान्नुहोस् कि अरूले यो प्रतिलिपि गर्दा कसरी प्रयास गरे। हामी सबैलाई दुई दुखाइ, आत्म नियन्त्रणको दुखाइ वा अफसोसको दुखाइ बीचको छनौट गर्नुपर्छ।
एक दिनको स्क्रीन छिटो
यो परीक्षण गर्न को लागी कुनै पनि व्यक्ति गेमिंग, सोशल मिडिया र अश्लील पनि कसरी निर्भर गर्दछ भनेर परीक्षणको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यहाँ पुस्तकबाट एक अंश हो मृत्युको लागि आफुलाई मनोरञ्जन गर्दैछ: व्यवसायको शो उमेरमा सार्वजनिक छलफल, एन। पोष्टम्यान र ए। पोष्टमैन द्वारा। (परिचय)।
"एक प्रोफेसरले प्रयोगको साथ पुस्तक प्रयोग गर्दछ जुन प्रयोगमा उनीहरूले 'ई-मिडिया छिटो' बोल्छ। चौथो-चार घण्टाको लागि, हरेक विद्यार्थीले इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट अवरोध गर्नुपर्छ। जब उनले असाइनमेंटको घोषणा गरे, उनले मलाई बताए, विद्यार्थी श्रोगको 90 प्रतिशत, सोच्न यो कुनै ठूलो सम्झौता छैन। तर उनीहरूले सबै कुरालाई महसुस गर्दछन् जब तिनीहरूले सम्पूर्ण दिनको लागि सेल फोन, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, टिभि, कार रेडियो, इत्यादिका लागि दिनैपर्छ - "तिनीहरू मोहन र दुखी हुन्छन्।" [तर] उनी अझै पुस्तकहरू पढ्न सक्छन्। उनले स्वीकार गरे कि यो एक कठिन दिन हुनेछ, यद्यपि लगभग चौथो-चार घण्टाको लागि तिनीहरू सुतिरहेका छन्। उनी भन्छिन् कि यदि उनीहरूले फोनको जवाफ फर्काउँदछन् भने भन्नुहोस् भने, भन्नुहोस् वा इमेल जाँच गर्न मात्र होईन- तिनीहरू खण्डबाट सुरु हुनुपर्छ। "मैले फर्केर कागजातहरू अचम्म छ," प्रोफेसर भन्छन्।
"तिनीहरूसँग 'मेरो जीवनको सबैभन्दा खराब दिन' वा 'द बेस्ट अनुभव मैले कहिल्यै भनेका शीर्षकहरू' लाई सधैं चरम। 'मैले सोधेँ कि म मर्छु,' उनी लेख्छन्। 'म टिभि घुमाउन गएको थिएँ तर यदि मैले गरेको महसुस गरें, मेरो ईश्वर, मलाई फेरि सबै सुरू गर्न चाहन्छु।' प्रत्येक विद्यार्थीको आफ्नै कमजोरी छ - केहिका लागि यो टिभी, केहि सेल फोन, केही इन्टरनेट वा उनीहरूको पीडीए। तर कुनै पनि कुराले उनीहरूलाई अपमानजनक नफरत नगर्ने, वा फोनको घण्टी सुन्न कति गाह्रो छ र यो जवाफ नगर्ने, तिनीहरूले आफूले गरेको वर्षहरूमा गरेको काम गर्न समय लिन्छन्।
तिनीहरू साँच्चै सडकमा आफ्नो मित्रलाई भेट्न हिंड्छन्। तिनीहरूले वार्तालाप विस्तार गरेका छन्। एकले लेखे, 'मैले चीज गर्न थालेँ कि मैले कहिल्यै सोचेको थिएन।' अनुभवले तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्दछ। केहि यति प्रभावित छन् कि तिनीहरूले आफ्नै मा एक दिन एक महिनाको तयारी गर्न तयारी गर्छन्। त्यसोभए मैले उनलाई क्लासिक्सको माध्यमबाट-प्लेटो र अरिस्टोलेबाट आज-देखि साढे साता सम्म लाग्दछु, जब पूर्व विद्यार्थीहरूले लेख्न वा नमस्कार गर्न बोल्छन्, उनीहरूको सम्झना भनेको मिडिया छिटो हो। "
यस पुस्तकको लेखकको छोरा अब यसको बिसो संस्करणमा यसो भन्छ:
"उनको प्रश्न सबै प्रविधिहरू र मिडियाको बारेमा सोध्न सकिन्छ। हाम्रो साथ के हुन्छ जब हामी संग संक्रमित हुन्छ र त्यसपछि उनीहरूको छेउमा परेको छ? के उनीहरू हामीलाई मुक्त वा कैद गर्नुहुन्छ? के तिनीहरू लोकतान्त्रिक सुधार र घटाउँछन्? के तिनीहरू हाम्रो नेताहरू अधिक उत्तरदायी वा कम बनाउछन? के हाम्रा प्रणालीहरू अधिक पारदर्शी वा कम त? के हामी हामीलाई राम्रो नागरिक वा उत्तम ग्राहकहरू बनाउछौं? के यो ट्रेड अफ अफ लायक छ? यदि तिनीहरू यसको लायक छैनन् भने, अझै हामी अर्को नयाँ कुरालाई गल्ती गर्न रोक्न सक्दैनौं किनकि हामी कसरी तारिख हुन्छौं, त्यसोभए हामी कस्ता रणनीतिहरू नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ? गरिबी? अर्थ? "हेर्नुहोस् समाचार कथा मा एडिनबर्ग स्कूल मा छठे फारम छात्रहरु को एक समूह को प्रबंधन गर्दा हामीले एक्सएनएनएक्सएक्स घन्टा को स्क्रीन छिटो गरे।
अश्लीलको बाध्यकारी प्रयोग?
परीक्षण गर्न यो प्रयास गर्नुहोस् यदि एक व्यक्तिले इन्टरनेट अश्लील पोर्नोग्राफी प्रयोग गरिरहेको छ।
यदि तपाइँ एक व्यक्तिलाई थाहा छ वा तपाईं आफैं, इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको लागि यो एक दिवसीय उन्मूलन परीक्षण प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ, यो सार्थक छ। यदि तपाइँ सफल हुनुहुन्छ भने, तपाइँ लामो समयसम्म उन्मूलन विस्तार गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यो 24 घण्टाको लागि व्यवहार कटौती गर्न सजिलो हुन सक्छ, तर एक हप्ता वा तीन हप्ताभन्दा अधिक बाध्यता भएको एक आदत परीक्षणको कसरी हो।
रिबुट लगभग सीधा टाढा हुन सक्छ। पहिलो घण्टा, पहिलो दिन र पहिलो हप्ता हो जब रिबुटकर्ताहरू अक्सर प्रायः विचलित हुन सकेनन् र केहि थप आग्रह गर्छन्। यदि तपाईंले लामो समयको लागि अश्लीलमा आफ्नो मस्तिष्कलाई प्रशिक्षण दिनुभएको छ भने, यो अश्लील-मुक्त जीवन बिताउन केही समय लाग्न सक्छ। रिबुट एउटा सजिलो प्रक्रिया होइन। यदि तपाइँ यसलाई सजिलो खोज्नुहुन्छ भने, केवल धन्यबाद हुनुहोस्। प्रायः लोकले यो चुनौती पाउँछ। तर फौजदारी हो, फरवार्ड हो। भावनात्मक वा शारीरिक लक्षणहरू अन्य रिबुटकर्ताहरूको पुन: प्राप्तिको लागि आफ्नो सडकमा आएको छ भन्ने बारेमा जान्न ठूलो मद्दत हो।
काटेर बनाएर बनाउदै
बस काटेर (हानि कमी) अधिकांश बाध्यकारी व्यवहारमा काम गर्दैन। इन्टरनेट अश्लील अपवाद छैन। चाँडै हामी बलियो हुन्छौं र त्यसलाई प्राप्त गर्नुहोस् 'अब केहि गर्नुहोस्!' सनसनी, हाम्रो स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटबाट सजिलो हिट इफेक्ट-राम्रो रसायनहरू प्राप्त गर्न अझै धेरै सजिलो हुन सक्छ। प्राय: पोर्न खपत कम गरी धेरै मानिसहरूको लागि पर्याप्त छैन, यो केवल आदत लामो हुन्छ। राम्रो तरिकाले विकसित मार्गहरू सजिलै शासनमा छन्। यसले नयाँ स्वस्थ मार्गहरू बढाउन महीना लिन सक्छ, नयाँ स्वस्थ मार्गहरू बढाउन र फेरि फर्केर आउँदैन। यसले अश्लील र लामो अवधि हेरेर विचलित गर्ने आदतको लागि पनि प्रयास र त्रुटिको धेरै प्रयास लिन सक्छ। त्यसैले यी बारे सोच्नुहोस्:
इन्टरनेट अश्लील हेर्न रोक्नुहोस्
अश्लील बिना इन्टरनेट प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्
12 कदम, SMART रिकभरी र आपसी सहयोग कार्यक्रम सबै मद्दत गर्न सक्दछ
सिक्नुहोस् कसरी इनाम प्रणाली मस्तिष्कले काम गर्दछ। बुझ्न यो बाध्यता डिसरेग्रेटेड दिमाग अवस्थाले सहज बनाउन सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ
तपाईंको लतलाई सेट गर्ने ट्रिगर र सिग्नहरू बारे जान्नुहोस्। तिनीहरूलाई जोगाउन तरिकाहरू खोज्नुहोस्
चरण2- दिमागलाई टाँस्नुहोस्
धेरै अप्ठ्यारोहरू केही प्रकारका मनोवैज्ञानिक सहयोगबाट लाभ उठाउँछन्। यो साथीहरू र परिवारबाट वा व्यवसायीहरूको रूपमा काम गर्ने पेशेवरहरूबाट आउन सक्छ। यो जहाँ हो हग्स, cuddles, मित्रता, विश्वास र सम्बन्ध को रूप मा प्रेम सबै मस्तिष्क मा न्यूरोकोमिकल ऑक्सीटोकिन को स्तर बढा सकते हो। अक्टोटोकिनले बिजुली र न्यूरोकोकेक्सको प्रवाहलाई सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्न धेरै उपयोगी गुणहरू छन्:
काउन्ट्स कोर्टिसोल (तनाव र अवसाद) र डोपामिन (cravings)
हटाउने लक्षणहरू कम गर्छ
सुरक्षाको सम्बन्ध र भावनालाई बलियो बनाउँछ
चिन्ता, डर र चिन्ताको भावना सोच्नुहुन्छ
तनावमा लचीलापन र दैनिक जीवनको उपभेद नियमित बनाउन गहिरो तरिकाहरू नियमित, गहिरो मानसिक विश्राम। एक संस्करण जो आज धेरै लोकप्रिय छ Mindfulness भनिन्छ। यसको अर्थ हो कि जो पनि हामीले भावना गर्दैछौं वा सचेतक तरिकामा छोटो समयको लागि सोच्दै जान्छौं मा ध्यान दिनुहोस। हाम्रा दमनशील विचारहरूलाई बेवास्ता गर्न वा तिनीहरूसँग सम्झौता गर्न समय नदिने भन्दा सट्टा, हामी तिनीहरूलाई हाम्रो दिमागमा आउन अनुमति दिन्छौं र तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्न वा तिनीहरूलाई समाधान गर्न वा तिनीहरूलाई बलियो तरिकामा जोगाउन कोसिस गरौं।
सहायक प्रविधिहरूको एक प्रभावकारी संयोजनले मदत गर्न सक्छ। प्रायः हाम्रो ओक्सटोकिन स्तर बढाउँदछ।
Mindfulness संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी) संग संयोजन मा राम्रो तरिकाले काम गर्दछ। जहां सीबीटी सोच र धारणा को नकारात्मक आदतों को बदलन को लागि होशियार, तर्कसंगत स्तर मा काम गर्छ, दिमागीपन को ध्यान गहरी बेहोशी, गैर मौखिक स्तर मा काम गर्दछ।
प्रेरणात्मक साक्षात्कार (एमआई) ले किशोर किशोरावस्था प्रयोगकर्ताहरूलाई सहयोगकारी अन्तर्वार्ताको प्रोत्साहन गरेर महत्त्वपूर्ण हुन सहयोग पुर्याउन सहयोगको लागि पनि उपयोगी साबित गरेको छ।
Mindfulness तनाव कम कार्यक्रम
विचारहरू हामी होइनौं। तिनीहरू परिवर्तनशील र गतिशील छन्। हामी तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं; तिनीहरू हामीलाई नियन्त्रण गर्न छैन। तिनीहरू प्रायः सोचको बानी बन्छन् तर हामी तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छौं जब तिनीहरू हामीलाई शान्ति र सन्तुष्टि ल्याउँदैनन् जब हामी तिनीहरूका बारेमा जानकारी पाउँदछौं। विचारहरू शक्तिशाली छन् कि उनीहरूले हाम्रो मस्तिष्कमा न्युरोक्राइमिक प्रकारको प्रकार परिवर्तन गर्छन् र सक्छ, समयमै धेरै पटक पुनरावृत्तिको साथ, यसको धेरै संरचनालाई असर गर्छ। Mindfulness हामी यी अवचेतन भावनात्मक चालकहरू र कसरी उनीहरु हाम्रो मूड र भावनामा प्रभाव पार्दै छन् भन्ने बारे जान्दछन् भन्ने एक महान तरिका हो। हामी फिर्ता नियंत्रण लिन सक्छौं।
एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अध्ययन निम्न परिणामहरू देखाउनुभयो जहाँ विषयहरू प्रति दिन 27 मिनेट औसत मनन अभ्यासको औसत गर्दै थिए:
एमआरआई स्क्यानले अलिग्दला (चिन्ता) मा खैरो मासु (तंत्रिका कोशिका) घट्यो।
हिप्पोकम्पस - मेमोरी र सिक्नमा ग्रेले कुरा बढ्यो
उत्पादन गरिएको मनोवैज्ञानिक लाभहरू जुन दिनभरि रहन्छ
तनावमा रिपोर्ट गरिएको कमी
नि: शुल्क ध्यान रेकर्डिङ
नि: शुल्क ध्यान
हाम्रो प्रयोग गर्नुहोस् नि: शुल्क गहिरो विश्राम अभ्यास तपाईंको दिमाग आराम र आराम गर्न मद्दत। तनाव न्यूरोकोमिकल्स को उत्पादन को कम गरेर, तपाईं आफ्नो शरीर को निको गर्न को लागि अनुमति दि्छ। तपाईंको दिमागले ऊर्जालाई उपयोगी सहयोगी र नयाँ विचारहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्छ।
यो पहिलो एक मात्र3मिनेट लामो छ र तपाईंलाई धूप समुद्र तटमा लैजान्छ। यसले तुरुन्तै मनमा सुधार गर्छ।
यो दोस्रो एकले तपाईंलाई आफ्नो मांसपेशिहरु मा तनाव जारी गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले 22.37 मिनेट लिन्छ तर केवल5जस्तै महसुस गर्न सक्छ।
यस तेस्रोको विचारलाई शारीरिक आंदोलनको कुनै संकेत नदिई दिमागलाई आराम गर्नु ताकि तपाईले यो रेलमा गर्न सक्नुहुनेछ वा अरूको वरपरमा। यसले 18.13 मिनेट सम्म पुग्छ।
यो चौथो एक 16.15 मिनेट लामो छ र तपाइँले क्लाउडमा जादुई यात्रामा लिन्छ। धेरै आराम।
हाम्रो अन्तिम ध्यान केवल 8 मिनेट भन्दा बढी र तपाईंको जीवनमा प्राप्त गर्न चाहने चीजहरू हेर्न मद्दत गर्दछ।
गहिरो विश्राम गर्ने कहिले?
यो सबभन्दा उत्तम छ गहिरो विश्राम व्यायाम बिहान वा दिउँसो दोश्रोमा पहिलो कुरा। खाना खाएर कम्तिमा एक घण्टा पछि छोड्नुहोस् वा खाने भन्दा पहिले यो गर्नुहोस् ताकि पाचन प्रक्रिया तपाईंको विश्रामको साथ हस्तक्षेप गर्दैन। यो सामान्यतया सबै भन्दा राम्रो छ कि यो कुरो तपाइँको सीतासँग सिधामा सिधै सीधा तर केही मान्छेले यसलाई तल झगडा गर्न मन पर्छ। त्यसपछि मात्र खतरा हो कि तपाईं सुत्नुहुन्छ। तपाईं सजग रहन चाहानुहुन्छ ताकि तपाईं सजग तनावपूर्ण विचारहरू रिहा गर्न सक्नुहुन्छ। यो सम्मोहन होइन, तपाईं नियन्त्रणमा रहनुहुन्छ।
चरण3- महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिक्नुहोस्
केही व्यक्तिहरू आनुवंशिक भविष्यवाणी वा जन्मिएको कमजोरीको अर्थ हो जुन उनीहरूलाई 'ज्योति प्राप्त गर्न' न्यूरोकोमिकल, डोपामिन चाहिन्छ जसलाई ड्राइभ र आनन्दको समान स्तर प्राप्त गर्न सकिन्छ जसलाई परिवर्तन जीन अवस्था बिना कसैले। ती व्यक्तिहरू, एक सानो प्रतिशत, अरू भन्दा भन्दा बढी को लागी अधिक प्रवृति हुन्छ। सामान्यतया, मानिसहरू दुई मुख्य कारणहरूका लागि बाध्यकारी व्यवहार वा लतमा आउँछन्।
पहिला तिनीहरू खुशी खोज्दै र अरू सबै जस्तो मजा गर्न थाले तर कहिलेकाँही उपचारले नियमित रूपमा आदत बन्न सक्छ। हामी सबैलाई सजिलै 'मजा' को वादामा लिप्त छौं भने परिणामले काम, दुखाइ, hangovers, छुटेको नियुक्तिहरू, टूटी वादाहरू हराएको छ। समयको अन्तर्गत सामाजिक दबाब र विज्ञापनले हामीलाई आनन्दमा बिरोध गर्न सक्दछ जसले हाम्रो इनाम प्रणालीमा शारीरिक मस्तिष्क परिवर्तन गर्दछ जुन प्रतिरोध गर्न कहिल्यै कठोर बनाउन सक्छ। FOMO वा 'हराएको डरको डर' भनेको एक सामाजिक दिमाग गेम हो जुन हामीलाई सजग हुनु आवश्यक छ। सोशल मिडियाले त्यस विशेष मस्तिष्क कीटलाई विकास गर्न मद्दत गर्दछ।
दोस्रो तरिका लत विकास गर्न सक्छ एक अवचेतन इच्छा हरेक दिनको जीवनमा एक पीडादायक प्रयास वा प्रयासबाट बच्न। यो उठ्न सक्छ किनभने कुनै व्यक्तिले नयाँ परिस्थिति जस्ता घटनाहरू सामना गर्न, व्यक्तिहरू, विवादास्पद वा पारिवारिक भेषहरूसँग जीवन बिताउन कहिल्यै सिकेका छैनन्। पहिलो पटक खुशी चाहन सक्छ जुन दबाबलाई रोक्न वा दुखाइ दुख्छ, तर अंततः यो मूल समस्या भन्दा भन्दा ठूलो तनाव हुन सक्छ। लतले मानिसलाई उनीहरूको आफ्नै आवश्यकताहरूमा पूर्णतया ध्यान केन्द्रित बनाउँछ र अरूलाई भावनात्मक रूपमा उपलब्ध छैन। तनाव माथि उठ्छ र जीवन तिनीहरूका माथिबाट हुन्छ, नियन्त्रणबाट बाहिर। अश्लील, शराब, जुवा, जंकर खाना, र गेम जस्तै केहि उत्प्रेरित गतिविधिहरु को उत्तेजक विज्ञापनदाताहरु लाई मज्जा खोज्न चाहने हाम्रो चाहना र पीडादायक भावनाहरु वा परिस्थितिहरु लाई परिस्थितीलाई बेवास्ता गर्दछ।
कुञ्जी जीवन कौशल सिक्न यो परिवर्तन गर्न र डिप्रेशन र लतमा पतनको जोखिम कम गर्न सक्छ। केवल नशेको व्यवहार हटाउनु अक्सर प्रायः पर्याप्त छैन। तनावको ट्रिगर प्रतिक्रिया अझै पनि व्यक्ति छोड्नु पर्ने छ र आलोचना वा विवादको सामना गर्न असमर्थ हुनेछ। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जो शराब वा ड्रग्सहरू राख्न र असफलताको पहिलो सङ्केतमा केवल क्रमांक गर्ने काम गर्छन, त्यसपछि रिफल्ट गर्ने प्रबन्ध गर्दछ। त्यहाँ युवा पुरुषहरु र महिलाहरु लाई पनि राम्रो कथाहरू छन् जुन उनीहरूलाई अश्लील दिंदा कठिन परिस्थिति सामना गर्न नयाँ बल र साहस भेट्टाउँछन्। केहि "सुपर" को विकास को बारे मा कुरा गर्छन।
पुन: प्राप्तिमा भएका मानिसहरू सबै भन्दा राम्रो सफल हुन्छन् र पछाडीबाट बच्न जब तिनीहरू जीवनको विकास बढाउँछन् र उनीहरूको जीवनको निर्माण गर्न र यसलाई अझ रोचक र पूरा बनाउने। यसको मतलब स्वस्थ स्रोतहरु बाट उनीहरु लाई चलाउन र खुशी को रुपमा विशेष रूपमा व्यक्तिको साथ अरुसँग जोड्नु र शर्म, गल्ती र अपरिवर्तित, पृथक वा एक्लो महसुस गर्दछन्।
त्यहाँ विभिन्न जीवन-कौशलहरू जसले मद्दत गर्न जान्दछन्:
शारीरिक भलाई निर्माण गर्न जीवनका कलाहरू
खाना खाने र नियमित स्वस्थ भोजनको आनन्द उठाउने
पर्याप्त रेसिभरी सुत्न पाउँदा 8 एक घण्टा वयस्कहरूको लागि, बच्चा र किशोरका लागि9घन्टा
शारीरिक व्यायाम, विशेष गरी समय समयमा प्रकृति खर्च गर्नुहोस्
मानसिक विश्राम व्यायाम - उदाहरणार्थ मानसिकता वा तपाईंको दिमागी बहाव मात्र दिँदै
योग, ताई ची, पिलेट
आत्मविश्वास निर्माण गर्न जीवनका कौशल
एक अनावश्यक मनले केहि हासिल गर्न सक्दैन। एक नयाँ कौशल चरण-दर-चरणलाई आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सक्छ। यो समय लाग्छ। एक दिमागले यो पहिले के थियो पछि फिर्ता कहिल्यै उत्तीर्ण। कुनै पनि हाम्रो सिक्न योग्य ज्ञान लिन सक्दैन। हामीसँग धेरै अधिक कौशलहरू, हामी बढी परिस्थिति परिवर्तन गर्न सक्छौं। यी कुकुरहरूले अराजकताको तनाव कम गर्छन्
आफ्नो विचार, नकारात्मकता र यौन फंतासीहरू नियन्त्रण गर्न सिक्नुहोस्
घर मा संगठनात्मक कौशल - सफाई र खरीदारी को दिनहरुमा; महत्त्वपूर्ण पेपरहरू, बिलहरू र प्राप्तकर्ताहरू क्रमशः राख्नुहोस्
जागिरको लागी आवेदन कसरी सिक्नुहोस् र साक्षात्कारका लागि राम्रो तयारी गर्नुहोस्
वित्तीय क्षमता - बजेटको सिक्न र सम्भव भएमा बचत गर्नुहोस्
अझ राम्रो कुराकानीको माध्यमबाट अरुसँग जोड्नका लागि जीवनशैली
आक्रामक, निष्क्रिय आक्रामक वा निष्क्रिय हुनको लागी उपयुक्त हुँदा साहसी हुन सिक्नुहोस्
अभिनव र प्रतिबिंबित सुन्न कौशल
द्वन्द्व व्यवस्थापन कौशल
स्वस्थ सामाजिककरण, उदाहरणार्थ मध्यवर्ती पारिवारिक सम्बन्ध
जीवन कौशलहरू फिसाउन, व्यापक र आफैलाई पूर्ण मानव जातिको रूपमा निर्माण गर्न
आन्तरिक भावना व्यक्त गर्न रचनात्मक हुनु - गाउन, नृत्य गर्न सिकाउनु, एउटा उपकरण, ड्रा, पेंट, कथा लेख्नुहोस्
मजा गर्दै, खेल खेल्दै, हँसिलो, मजाक भन्नुहोस
स्वैच्छिक काम, अरूलाई सहयोग गर्न
यो वेब पृष्ठले केवल इनाम इनामको सरल रूपरेखा दिएको छ 3-step रिकभरी मोडेल। हामी आगामी महिनाका प्रत्येक तत्वहरूलाई समर्थन गर्न थप सामग्री उत्पादन गर्नेछौं। तपाईं यी जीवनका कुशलतामा स्कूल, युवा क्लबहरू वा तपाईंको समुदायमा कक्षाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको स्थानीय पुस्तकालय वा अनलाइनमा तिनीहरूलाई जाँच गर्नुहोस्।
यहाँ हाम्रो तीन सरल चरणहरू छन्:
1 - अश्लील प्रयोग गर्न रोक्नुहोस्
2 - मन मन छ
3 - मुख्य जीवन कुञ्जी सिक्नुहोस्
<< पोर्न पोष्ट फ्री TRF 3-चरण रोकथाम कार्यक्रम >>